ညီလင်းသစ်: စိတ်၏ချည်တိုင် နိုင်ငံကလေးသို့ (၅)
Posted by ညီလင်းသစ် au 2.12.13
အဲဒီလို ဆင်တွေကို နီးနီးကပ်ကပ် မကြူံဖူးဘူးရယ်...သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ ကိုထွန်းထွန်း၊ မော်၊ မော့်ဦးလေးတို့ တွေအကြောင်း ဖတ်ရတာ လေးစားစရာ..မြန်မာပြည်ရောက်ရင် သွားဖြစ်အောင် သွားဦးမယ်..သားသားမပြောနဲ့ဖတ်ရတဲ့သူတောင် ပျော်သွားတယ်...ဓာတ်ပုံ၊ စာအရေးအသားက flawless & awesome post..အင်းလေးကို ကိုညီနဲ့ အတူ လိုက်လည်ဖို့စောင့်မျှော်ပါကြောင်း
ပုံတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့ ဆင်စခန်း အတွေ့အကြုံမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ပင့်ကူသုံးကောင်ပုံအရမ်းမိုက်တယ်။ အင်းလေးယက်ကန်းစင်တွေနဲ့နီးလို့ ရက်ကန်းအတတ်တွေ ဓါတ်ကူးသွားတာလား ဆိုတာကို သဘောကျလို့မဆုံးဘူး :D Tourism က ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဆင်စခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်သူငယ်ချင်းရဲ့ အိုင်ဒီယာကိုလည်း လေးစားမိတယ်။ :)
I like your Burmese usages and writing style too.
အဲဒီကို သွားချင်ရင် ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲဟင်
သားတော်မောင် ဆင်သင်္ကြန် ကျတာကို သဘောတကျ ရယ်နေမိတယ်... ဟီးဟီး
အင်းလေးကို လိုက်လည်မယ်... မြန်မြန်သွား... :D :D :D
ဒီပို့စ်မှာ အချစ်ဆုံးက ဆင်းကလေးဖိုးချစ်ရယ် ကလေးနှစ်ယောက်ရယ်ပဲ...:)
ဒီ တစ်ခါ ပို့စ်က စိတ်ကို တော်တော်တွန်းတိုက်လှုပ်ခတ်သွားတယ်..။
အကို ဟာ ခရီးသွားဆောင်းပါးရေးတာ တကယ်ကောင်းတဲ့ သူပါ....။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်တဲ့ စိမ်းစိုအေးမြမှုကို ချစ်တဲ့ ညီမအတွက် ဆင်စခန်းကို သဘောတကျကြည့်နေမိတယ်..။
ပြည်တွင်းက လူတွေ ရောက်ဖို့တော့ သိပ်မလွယ်ဘူးထင်ပါ့..။ ဒါ က Foreigner တွေအတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ထားတာလား မသိဘူး..။ တောင်တန်းတွေဝန်းရံထားတဲ့ ဒီ ဆင်စခန်းလေးကို မြင်ရတာ တော်တော်သဘောကျမိတယ်...။ ကလေးတွေ ပျော်နေတာ မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာ :))
အကို အင်းလေးကိုလည်း ရောက်ခဲ့သေးတယ်လား..။
နောက်ပို့စ်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဦးမှာပဲ :))
mass tourism ရှောင်တာ ကြိုက်ပါတယ်။ တရက်ကို လူ၂၀ ပဲ လက်ခံတယ်ဆိုတော့ ဒီတိုင်း လမ်းကြုံ ဝင်သွားလို့မရဘူးလား။ ကြိုတင်ဘွတ်ကင် လုပ်ရမှာလား။ ဘယ်ကိုလုပ်ရမှာလဲ။ အမြန်ဖြေပေးပါ ကိုညီလင်းရေ.. သွားချင်လို့ :)
Wow wow wow ...လို. ပထမဆုံး အော်ပါရစေ။
ဖတ်နေကျ စာ၊ တွေ.ဖူးနေကျ မြင်ကွင်းတွေမဟုတ်တာနဲ.တင် စာတွေပြီးသွားမှာတောင် စိုးတယ်။
ပုံတွေအကုန်လုံးကလဲ တပုံချင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းတယ်။ ၄ပုံမြောက်က စားပွဲရှည် ပြင်ဆင်ထားပုံနဲ.၊ စားပွဲရဲ.အရောင်ကိုအလွန်သဘောကျမိပါတယ်။
ပြီးတော. ဆင်တွေနဲ.နာမည်ထဲမှာ ရှုလေးခင်နဲ.သောင်းကန်ဌေးဆိုတဲ.နာမည်ကိုတော်တော်သဘောကျမိတယ်။ သောင်းကန်ဌေး ဆိုတဲ.နာမည်ကို ဘယ်လိုများ စဉ်းစားပြီးမှည်.လဲမသိဘူးနော်။
ကိုညီလင်းသားလေး ရေတွေနဲ. ဆင်ကိုပက်နေတဲ.ပုံကတော. တကယ်.ကိုပျော်စရာကြီး။ ကလေးတိုင်းကြိုက်မယ်. ကိစ မျိုးဘဲ။ ကျမ သမီးသာဆိုလဲ အဲ.လိုနေရာမျိုးများရောက်လို.ကတော. ရေထဲကကိုတက်တော.မယ်မထင်။
ချပါတီ ကိုလဲ စိုက်ကြည်.သွားပါတယ်နော်။ ပြီးတော. ချပါတီပုံအောက်က တံတားလေးကလဲ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုဘဲ။
ဆင်လည်တွေအကြောင်းကလဲရီရတယ်နော်။သူတို.ခလောက်ထဲကို သစ်ရွက်တွေထိုးသွင်းထားတယ်တဲ.။သူတို.လဲ ခေသူမဟုတ်တွေဘဲ။
ကိုညီလင်းရဲ. သူငယ်ချင်းမောင်နှံကိုလဲ တကယ်. ဘရာဗိုဘဲ။ သေချာပြန်ပြီးအရသာခံပြန်ဖတ်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါ ကိုညီလင်း
Every post you wrote is very attractive to me and wish not to end so soon. We have to know and respect the group of people who loves nature, maintains the forest well and create wonderful place in the jungle. I really wanna visit to Green Hill Valley if haveachance. Photos are amazing. Thar Thar is so cute.
သားသားက အတော်ကို ထွားလာပြီနော်။
ဆင်သင်္ကြန်မှာ သူသိပ်ကို ပျော်နေတာ ချစ်ဖို.ကောင်းလိုက်တာ။
ဖိုးချစ်ကလေးကလဲ မျက်နှာကိုက ပြုံးနေသလိုလေးပဲ။
ပင့်ကူကြီးတွေက အရောင်အသွေးစုံပြီး လှလိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်တွေက အတော်အဆိပ်ပြင်းမယ် ထင်တယ်။
ခဏခဏ လာဖတ်လိုက် ဓါတ်ပုံတွေ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါပဲ။
သွားချင်တဲ့စိတ်ကလဲ တဖွားဖွားပဲ။ ကလောကော ရေယားခြံမှာကော ငယ်ငယ်က အတော်ကြာအောင်နေဖူးခဲ့တော့စိတ်ကူးထဲက ပုံတွေ ပြန်ဖေါ်ရင်း ဖတ်ရတာ သိပ်အရသာရှိပဲဗျာ။
ပျော်စရာပဲ။ သွားချင်ပါတယ်။ တနေ့ နေ့ တော့
လှလိုက်တဲ့ပင့်ကူတွေ ကိုက်ခံရရင် Spider Man ဖြစ်သွားမလားဘဲ ဆင်ပေါက်အသေးလေး ဖိုးချစ်ကို တော်တော်သဘောကျသွားပြီ နောက်တစ်ခါရုံးပိတ်ရင် ကလောသွားမယ် :)
ရပ်ဝေးတိုင်းတစ်ပါးကနေ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာ အလည်လာတဲ့ မောင်ညီလင်းတစ်ယောက် ဗဟုသုတတွေ အများကြီးကို စိတ်၏ချည်တိုင် အမှတ်စဉ်တွေနဲ့ ရိုက်ချက်လှလှလေးတွေတွဲဘက်ပြီး စာဖတ်သူတို့ကို အသိဥာဏ်တွေပွင့်လင်းစေတာ ချီးကျူးစရာပါ...
ပွင့်လင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မောင်ညီလင်းရဲ့ ဇနီးနဲ့သားတော်မောင်ကိုလည်း သတိတရ နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့ ...:)
ကိုထွန်းထွန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ စိတ်ကူးက
ကောင်းလွန်းသလို၊ လေးစားချင်စရာ..။ သားသားကို သဘာဝလောကကြီးနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ သူသိပ်ပျော်နေတာ အထင်အရှားပဲ။ နောက်ဆို မြန်မာပြည် အလည်သွားမယ်ဆို ကလောပဲ သွားချင်နေတော့မှာ သေချာတယ်...။ အင်းလေးကို ရောက်ဖူးပေမယ့် ကိုညီ့ဆောင်းပါးနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်သွားဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်။ စကားမစပ်..မဒမ်ညီ့ကို သတိရကြောင်း မေးပါကြောင်း ပြောပေးပါနော်။
I kept smiling reading this.
Thar Thar is so lucky to haveagreat father like you, ko nyi.
Why don't he writeapost about this trip.
Ko Nyi...Whatalovely photo essay it is...
Please let me share on the Facebook.
I am catching up with all your posts. Whatanice visit to Myanmar. Of course it is suchatreat to read about Kalaw. It is my favorite town. I studied there for3years. I haven't been back since 95. I heard about the Green Hill Valley! Thank you for all the beautiful pictures and info. I have to add one more must visit place in MM. My sister and Ma Maw are closed friend. I hope she could arrange something for me in short notice. :-)
အခုလိုလာလည်တဲ့ အတွက်ရော၊ ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...၊
ဟုတ်... ကျေးဇူးဗျ၊း)
သူတို့ကတော့ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး လုပ်နေတာပါပဲဗျာ၊ အမြဲတမ်းလာလည်လို့လည်း ကျေးဇူးနော်...၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျ...၊ အဲဒီပင့်ကူတွေက အင်းလေးဖက်ကနေ ကူးလာတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ၊းD
Thanksalot for your appreciation. It encourages me to keep going. :)
ဒုတိယမြောက် ဓာတ်ပုံရဲ့အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ Green Hill Valley ဆိုတဲ့ နာမည်ကို နှိပ်လိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီမှာ ဆက်သွယ်ဖို့ အပြည့်အစုံ ပါ,ပါတယ်ခင်ဗျာ...၊
လိုက်ခဲ့..လိုက်ခဲ့..၊ လောလောဆယ် လှေဆင်းတွန်းစရာ မလိုသေးဘူး..၊းD
ဟုတ်.. ကျနော်လည်း နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဆင်တွေကို မမြင်ရပါဘူးဗျာ...၊း)
ဟမ်... ဒါပဲလား? ;)
အဲဒီနေရာမှာ ဘယ်အရပ်မျက်နှာပဲ လှည့်လှည့် စိမ်းလန်းမှုကို တွေ့ရတာတော့ အမှန်ပဲဗျ၊း) Foreigner သီးသန့်ရယ်လို့တော့ မသတ်မှတ်ထား ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်လို့ တချို့တွေအတွက် အခက်အခဲတော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်မယ် ထင်တယ်..၊
ဒီအတိုင်း လမ်းကြုံဝင်သွားလို့တော့ မရဘူးဗျ၊ သူတို့က ဘွတ်ကင်နဲ့ လက်ခံတာပါ၊ ဒုတိယ ဓာတ်ပုံအောက်က Green Hill Valley ဆိုတဲ့ နာမည်ကို နှိပ်လိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပေါ်လာပါ့မယ်၊ အဲဒီမှာ အပြည့်အစုံ ရှိပါတယ်နော်..၊
ဟုတ်ပဗျာ..၊ အဲဒီ ‘သောင်းကန်ဌေး’ ဆိုတာကို ဘယ်လိုများ စိတ်ကူးရပြီး မှည့်သလဲလို့ ကျနော်လည်း စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်၊း) နှစ်သက်တာလေးတွေကို တစ်ချက်ချင်း ပြောသွားလို့ ကျေးဇူးပါနော်..၊
Indeed, we need more and more awareness nowadays to love, value and conserve the natural resources. Thanks also for your encouragement! :)
မှိုမှာဆိုရင်တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရောင်တောက်နေတဲ့ မှိုတွေက အဆိပ်ရှိတာ များတယ်၊ ဆိုတော့ ဒီပင့်ကူတွေလည်း အနည်းနဲ့ အများတော့ အဆိပ်ပြင်းမယ်လို့ ကျနော်လည်း ထင်တယ်ဗျ..၊
ဟုတ်ကဲ့...၊ စာလာဖတ်နေသေးတာ သိရလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ..၊ ရေယားမှာ ကျနော်လည်း နေခဲ့ဖူးတယ်ဗျ...၊း)
ဟုတ်...၊ တစ်နေ့တော့ ရောက်ဖြစ်အောင် သွားပါ အစ်မရေ...၊
ကဲ.. ဖိုးချစ်ရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက် ထပ်တိုး ပြန်ပြီပေါ့...၊း)
သေချာတယ်၊ Spider man တောင်မှ ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး၊ Colorful spider man ကို ဖြစ်သွားမှာ...၊းD
ဟုတ်.. မျှဝေခွင့် ရတာကိုပဲ ကျနော်က ဝမ်းသာလှပါပြီ၊း) တီတင့်ပြောတဲ့အတိုင်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊
ဟုတ်.. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကလေးတွေ ချစ်မြတ်နိုးလာစေဖို့ ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ တွေးမိပါတယ်၊ ဒါမှ ရေရှည်တည်တံ့မှု ဆိုတာကို ကျနော်တို့ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှာ မဟုတ်လား၊ အစ်မက နှုတ်ဆက်တဲ့အကြောင်း မအိမ်သူကိုလည်း ပြောလိုက်ပါပြီနော်..၊း)
ဟုတ်... ရှုခင်းကတော့ ကော်ဖီနဲ့ တွဲသောက်လို့ ကောင်းတဲ့ ရှုခင်းမျိုးပဲဗျ၊း) အလည်လာတာ ကျေးဇူးပါနော်...၊
He's6years old and can't write yet. :) I'm sure he'd have written up if he could have been. Though I think I'm notagreat father, I try and remind myself to give himahappy childhood. Thank you so much for your kind comment! :)
ဟုတ်ကဲ့...၊ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ..၊း)
Thank you! Yes...please do!
Ma Sint Si,
Ah..you are also the one who knows and lived in Kalaw. :) No wonder it is your favourite town. Oh, your sister is Maw's closed friend? There isachance I might have even heard Maw mention about your sister. :) A good decision to go and visit GHV! :)
ကျေးဇူး ကိုညီလင်း :) အားလုံးမှတ်ထားလိုက်တယ်
ကိုညီလင်းရဲ့ ဒီပို့စ်ဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင် ဆင်စခန်းရောက်သွားသလိုပဲ … အရေးအသားနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက ဆွဲခေါ်သွားလိုက်တာ … ပြီးသွားမှ အသက်ရှူမိတယ်။
ကိုထွန်းထွန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အိုင်ဒီယာကို သိပ်သဘောကျတာပဲ … သူတို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်လဲ ဝင်ကြည့်ပြီး မှတ်ထားလိုက်တယ်။ သွားချင်တဲ့သူတွေကို ညွှန်ရအောင်နဲ့ ကိုယ်လဲ အဆင်ပြေရင် သွားလို့ရအောင်လို့။
ကိုညီလင်းတယောက် ဆင်သွားရင်ဖြစ်တဲ့လမ်းမှာ ဆင်မယဉ်သာဟန်နဲ့ လျှောက်ပြီး ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်ခဲ့သေးသလားဟင်။ ဆင်လဲ ဆင့်အထွာ … ဆိတ်လဲ ဆိတ်အထွာမို့ ဆင်ကျီစားရာ ဆိတ်မခံသာ ဖြစ်တတ်သေးတာနော် … ဆင်စီးပြီး မြင်းရံဖို့အတွက် ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှ တစ်မနေဖို့လိုမယ် ထင်တာပါပဲ :D
ဆင်တွေ အများကြီးမြင်လို့ ပျော်သွားပြီး ဆင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံတွေ ခေါင်းထဲပေါ်လာသလောက် လျှောက်ရေးကြည့်တာ ကိုညီလင်းရေ … ။
ဆင်စခန်း လိုက်လည်ရတာ စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ရပါတယ်။ သစ်ပင်လေးတွေ စိုက်ခိုင်းတဲ့ ထွန်း နဲ့မော် တို့ စိတ်ကူးလေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဖိုးချစ်လေး အဖေ အမေ နဲ့ ကွဲသွားပုံလေးဖတ်ပီး စိတ်မကောင်းဖြစ်တာ ဖိုးချစ်လေးကို ချစ်ဂရုဏာ ပိုတိုးစေတာပဲ။ ဆင်စခန်းမှာ ကိုညီတို့ မိသားစု အရမ်းကို relax ရသွားမှာပဲနော်။ အင်းလေးအလည်ခရီးလဲ ဆက်လိုက်ပါခွင့်ပြုအုံးနော။
မော် (Green Hill Valley) said...
Blog ရေးတဲ့သူငယ်ချင်းကိုရော၊ comment ပေးတဲ့အစ်ကိုတွေအစ်မတွေကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကလောရောက်လို့အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် လာလည်ဖို့ဖိတ်ပါတယ်။ မလာခင် ရက်အနည်းငယ်လောက် ဖုန်းကြိုဆက်ဖို့တော့မ မေ့နဲ့နော်။